अब, दिल्ली–काठमाडौं–बेईजिङ त्रि–देशीय साझेदारीबारे छलफलः डा. भट्टराई
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवम् नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहका नेपाल तर्फका सदस्य डा. राजन भट्टराईले काठमाडौंमा मात्रै नभएर अब दिल्ली र बेईजिङमा पनि भारत–नेपाल–चीनबीचको त्रिदेशीय साझेदारीबारे बहस सुरु भएको बताएका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वैशाख
भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन बाबुरामको माग
काठमाडौँ । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुदान रकम एकमुष्ट रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारसाग माग गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित भूकम्पको गतिविधिलाई समेटेर तयार पारिएको ‘कम्पन’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कँडेल
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा.पुष्प कँडेललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बिहान बसेको बैठकले कँँडेललाई नियुक्त गरेको हो । नेकपा एमालेका केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका कँडेल अर्थविद हुन् । धादिङका स्थायी वासिन्दा कँडेलले ३० वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा
काठमाडौँ । बिरामीको औषधि किन्न डाक्टरले लेख्ने प्रेस्क्रिप्सनमा अब औषधिलगायत सबै कुरा स्पष्ट बुझिने गरी लेख्नुपर्ने भएको छ । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार प्रेस्क्रिप्सन नबुझिएका कारण गलत औषधि सेवन गरेर बिरामी समस्यामा परे तीन महिनासम्म डाक्टर निलम्बनमा पर्नेछन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटीले
मोदी वैशाख २८ मै नेपाल भ्रमणमा आउने
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वैशाख २८ मै नेपालको भ्रमण गर्ने भएका छन् । यसअघि नेपालले जेठ ११ गते स्वागत गर्ने तयारी गरेपनि भारतीय पक्षले वैशाख २८ गते नै उपयुक्त हुने भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो । अब मोदी वैशाख २८ मा नेपाल आउनेछन् । ‘हामीले
काठमाडौँ । वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. विष्णुदत्त पौडेलले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नै नसर्ने रोगको प्रमुख जड भएको स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार क्यान्सर काउन्सिल नेपालले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा माछापुच्छ्रे बैंकको प्रायोजनामा आयोजित ‘जनचेतनामूलक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम’
काठमाडौँ- नेपालले चीनसँग यातायात सञ्जाल, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। चीनको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्केका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा
दुर्घटनाबाट जोगियो त्रिभुवन विमानस्थलमा माल्दिनो एयर
काठमाडौँ ७ वैशाख । मालिन्दो एयरको जहाज दुर्घटना भएपछि नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थल शुक्रबार बिहान पनि अवरुद्ध भएको छ । विदेशबाट यात्री लिएर आएका विमानहरू अवतरण गर्न नसकेपछि फर्काइएका छन् । विहीबार राति काठमाडौंबाट मलेसियाको क्वालालम्पुरतर्फ उड्न लागेको मालिन्दो एयरको जहाज
मिटरमा हिँड्न नमान्ने ट्याक्सीलाई कारबाहीमा तीव्रता
काठमाडौँ ६ वैशाख । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकामा मिटरमा हिँड्न नमान्ने ट्याक्सी कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ । महाशाखाले ट्याक्सी मिटरमा हिँड्न नमानेको व्यापक जनगुनासो कार्यालयमा आएपछि अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो । महाशाखाका सहप्रवक्ता मुकुन्द मरासिनीले मिटरमा हिँड्न नमान्ने दैनिक
अमेरिकी सीआईए प्रमुखले किमजोङसँग गोप्य भेटवार्ता गरेको खुलासा
वासिङटन डीसी । उत्तर कोरियाली नेता किमजोङ उनसँग अमेरिकी गुप्तचार विभाग (सीआईए)का प्रमुख माइक पोम्पेओले गोप्य भेटवार्ता गरेको खुलासा भएको छ । पोम्पेओले गत साता किमसँग भेटवार्ता गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विटरमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्। उक्त भेटवार्तामा दुवै देशबीच सम्बन्ध
निलम्बन फुकुवा गर्न आवश्यक लचक हुन्छौं : क्यान
काठमाडौँ ५ वैशाख । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निर्वाचित कमिटीले क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्नका लागि अहिलेको विधान संशोधन गर्न आवश्यक लचकताका साथ प्रस्तुत हुने बताएको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्यानको निर्वाचित कमिटीले निलम्बन फुकुवा भइ नेपाली क्रिकेटले निकास पाउने अवस्थामा आफूहरु लचकताका
गोरखा ४ बैशाख । गोरखा जिल्ला अस्पतालमा ७ जना विशेषज्ञ डाक्टरसहित १३ जना डाक्टरको दरबन्दी भए पनि विशेषज्ञ डाक्टर भो अस्पतालले पाएको छैन् । ‘२०६९ सालमा अस्पताल १५ बाट ५० शैय्यामा स्तरोन्नति भएसँगै विशेषज्ञ चिकित्सकको दरवन्दी थपिएको थियो,’ अस्पताल प्रमुख डा. श्रीराम तिवारीले भने, ‘तर अहिलेसम्म
चितवन ३ वैशाख । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले अधिनायकवाद शुरु गरिसकेको आरोप लगाएका छन् । भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले मनोमानी ढंगले सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “सरकारले एकलौटी गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । अधिनायकवाद शुरु भइसक्यो । मनोमानी
दाने बोहरा/ हुम्ला । निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ वर्षको अवसर पारेर शनिवार ‘कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’ को उद्घाटन गर्न रारा ताल पुगेका थिए । राराको सम्मुख बसेर सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन विकास र मुलुकको समृद्धिको कुरा गरेर समय खर्चे । उनले ‘कर्णाली पर्यटन
नारायणगढ–मुग्लिन सडक फेरि बन्द, यस्तो छ कारण
चितवन २ वैशाख । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आजदेखि दैनिक ६ घण्टा बन्द हुने भएको छ । निर्माण पूरा हुन १२ प्रतिशत काम बाँकी रहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि पुनः दिउँसोमा ६ घण्टा बन्द गरिने भएको हो । आयोजनाले शनिवार एकदिन नयाँ वर्षका लागि भनेर दिनभर सडक खुल्ला गरेको थियो । आजदेखि पुनः विहान १० बजेदेखि
प्रहरी प्रमुखमा सर्वेन्द्र खनाललाई नै नियुक्त गर्नुको यस्तो छ कारण
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक ‘आईजीपी’मा सर्वेन्द्र खनाल नियुक्त भएका छन् । साथै शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले डीआईजी खनाललाई आईजीपीमा बढुवा गरेको हो । आईजीपीका लागि सर्वेन्द्र खनालसँगै रमेश खरेल र पुष्कर कार्की दौडमा थिए
बालअधिकारका लागि सगरमाथा आरोहण गर्दै पाण्डे
काठमाडौँ । एघार वर्षदेखि स्काउटमा रहेर बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रकाशराज पाण्डेले सगरमाथा आरोहण गर्ने भएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले बालअधिकारका लागि चेतना फैलाउन आफूले बुधबारदेखि सगरमाथा आरोहण गर्न लागेको
साढे ११ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा परशुराम बस्नेतलाई सफाइ
काठमाडौँ । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा परशुराम बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ । आइतवार अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यद्वय रत्नबहादुर वागचन्द र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले सफाइ दिएको अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले बताए । उनले युवा संघका नेता समेत रहेका बस्नेतमाथि लगाइएको
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विज्ञानमा मानार्थ विद्यावारिधि
काठमाडौं- भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्राविधिक विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधिको (पीएचडी) उपाधि प्रदान गरेको छ। भारतको उत्तर प्रदेश पन्तनगरमा रहेको विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विज्ञानमा मानार्थ पीएचडीको उपाधिले सम्मान
काठमाडौं । ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको सरूवा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणमा जानुअघि सचिवहरुको सरुवा गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सबै सचिवहरुको सरुवा गर्ने नीति अनुरुप सरुवा गरिएको बताएका छन् । उनले ३० जना सचिवको जिम्मेवारी
एकजना ब्यक्तिले बीस महिनामा बीस देश घुमेर बीस वटा घुमन्ते रेष्टुराँ चलाउँछु भने । गएको वर्ष डिसेम्बरको दोस्रो हप्ता उनी सहित उनको टीम नेपाल आईपुग्यो । टेकिङ्गमा उनीहरुले दुई हप्ता बिताए । र संसारभरिबाट आएका पाहुना र केही शेर्पालाई सत्र हजार छ सय फिट माथि रहेको ठाँउमा डिनर खुवाए । त्यो ठाँउमा डिनर खान आवदेन
काठमाडौँ । वरिष्ठ हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठकी पत्नीको निधन भएको छ। नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिशिद्धिमा विगत ८ वर्षदेखि उपचाररत्त यशोदा श्रेष्ठको ६७ वर्षको उमेरमा सोमबार १०ः४५ बजे राति अस्पतालमै उपचारको क्रममा निधन भएको उनको उपचारमा संलग्न डाक्टर सुदिप श्रेष्ठले बताए । कलाकार हरिवंश